Ny fitondrana vohoka Firaisana ara-nofo Soa: Ahoana ny Firaisana ara-nofo Mandritra ny fitondrana Vohoka Dia Tsara ho an'ny Fahasalamana sy ny Zaza Ny Zavatra Hitranga
Ny fitondrana vohoka Firaisana ara-nofo Soa: Ahoana ny Firaisana ara-nofo Mandritra ny fitondrana Vohoka Dia Tsara ho an’ny Fahasalamana sy ny Zaza Ny Zavatra Hitranga
Anao sy ny mpiara-miasa mety efa nanana be dia be ny efi-trano fivoriana raha ianao no miezaka hitoe-jaza. Fa ankehitriny fa bevohoka ianao, ny fihetseham-po manoloana ny firaisana ara-nofo mety tsy ho tena tsotra. Tsy misy atahorana? Azo atao ve ny manao izany ny aina? Ary ambonin’ny zavatra rehetra, dia izany aza, mendrika izany ianao, raha mahatsiaro ho reraka sy aleony fotsiny conk avy tany am-boalohany. Ny valiny roa voalohany dia eny manakoako tokoa. (Ary ny fahatelo, dia tsara, fa iray dia mbola miankina aminao.) Raha mbola ianao fihetseham-po ho azy sy ny dokotera dia tsy nilaza aminareo raha tsy izany, dia mihoatra noho ekena hanana firaisana ara-nofo mandritra ny manontolo ny fitondrana vohoka. Inona no kokoa, ny firaisana ara-nofo mandritra ny fitondrana vohoka avy amin’ny tsara tarehy ny sasany mamy perks. Eto dia valo tombontsoa azo avy amin’ny ny fitondrana vohoka firaisana ara-nofo izay vao mety hahatonga ny fotoana eo am-pandriana na dia tsara kokoa. Mety ho raring to go saingy mbola manana ny famandrihan-toerana fa ny firaisana ara-nofo mety toa handratra ny zaza. Tonga ny fotoana mba hanipy ireo avy ny varavarankely. Raha tsy ny no manao azy dia milaza ianao fa misy antony tokony hijanona avy ny kitapo, ny firaisana ara-nofo mandritra ny fitondrana vohoka dia tanteraka soa aman-tsara. Noho izany, aza manahy ianao, tsy handratra ny zaza amin’ny fomba rehetra, na ny mampitombo ny mety ho aretina (mihevitra ho manana ny mpiara-miasa tsy manana STD). Sy ny fananana levitra tsy ny vintana ho afa-jaza na preterm ny asa. Manonja hormonina atao ny mandefa ny firaisana ara-nofo fiara ambony kokoa noho ny mahazatra. (Na raha fotsiny ianao tsy mahatsapa izany, fa ny ara-dalàna ihany koa.) Na dia tsara kokoa. Izay rehetra fanampiny ra ny vulva afaka mampitombo ny fahatsapana, noho izany dia afaka mahatsapa lalina kokoa ny fihetseham sy orgasms. Mety na dia ny mahita ny fahafinaretana faritra izay tsy dia mahalala anao. Ho tanteraka ravo sy tretrika momba ny mananontanona trotroana angamba tsy nanakana anao tsy indraindray mahatsiaro manahy, weepy na miady saina (misaotra, hormonina.). Ny fitondrana vohoka dia mety ho fihetseham-po roller coaster, fa ny firaisana ara-nofo mety ho fomba lehibe mba decompress sy fotsiny ho ao amin’ny fotoana. Plus, ny oxytocin firongatry izay tonga rehefa ianao levitra boosts ny fihetseham-po ny fitiavana sy ny hafaliana, mahatonga anao hahatsapa na ho akaiky kokoa amin’ny mpiara-miasa. Fotsiny ka tsy fantatro, Inona no mba Manantena mety mahazo ny iraka avy amin’ny lisitry ny rohy tafiditra eto amin’ity pejy ity. Tsy dia ny fitondrana vohoka firaisana ara-nofo tsy handratra ny kely iray, fa maro ireo perks fa tonga ny lalana, dia manao zavatra tsara ho an’ny ny zaza loatra. Ohatra, ny fandoroana vitsivitsy fanampiny kaloria ho afaka hanao izany somary mora kokoa ho anao mba tsy hahazo be loatra ny lanja mandritra ny fitondrana vohoka, ary ny mafy orina ny hery fiarovana dia afaka manampy ny ampinga azy ny avy amin’ny vokatry ny hatsiaka, na ny gripa.
Tsara kokoa ny fihetseham-po ho anao midika fa ny zaza tratran’ny vitsy ny adin-tsaina hormonina toy cortisol. Ary fa afaka manana fiantraikany tsara eo amin’ny kely iray ny fampandrosoana roa, aloha sy aorian’ny fiterahana. Zava-misy: Ny tsy mitsaha-mitombo ny kibo farany mety hahatonga ny sasany ny toerana tena toerana tsara tarehy mahazo aina.
Tsy manahy, na izany aza
Mbola misy be dia be ny fomba hahazoana azy io tamin’izany dia mahatsapa tsara fa na ianao sy ny namanao. Ary ny sasany amin’izy ireo mety ho vaovao dia midika fa ny fitondrana vohoka firaisana ara-nofo dia afaka ny ho mahafinaritra fahafahana mba hanandrana. Mety hiezaka ny fitondrana vohoka-namana toerana firaisana ara-nofo toy ny lafiny-lainga, ny vehivavy eo an-tampony, ary ny vodi-teny ho manintona indrindra. Saingy misalasala mba hijery miaraka amin’ny mpiara-miasa ny mahita ny zavatra rehetra ny asa. Raha mbola ianao aina, na inona na inona ny lalao ara-drariny. Fotsiny aza mandry amin’ny indray fa ela loatra amin’ny fotoana. Manana levitra mandrisika ny tranonjaza ny fifanekena. Raha tsy ianao akaiky ny rambony-pahatapitry ny fitondrana vohoka sy ny vatana dia vonona ny hanomboka ny hiterahany ny dingana, ireo contractions dia tsy ampy hahatonga anao ho any an-asa. Fa indray mandeha ny zaza manapa-kevitra fa tsy fotsiny mikasika ny mandeha ny fotoana, ny romp tao an-kitapo mety ho afaka hanampy ny hifindra ny zavatra miaraka (na dia tsy foana, ka tsy ho diso fanantenana raha toa ka na inona na inona zava-mitranga). Fa raha ianao ho an’ny firaisana ara-nofo nandritra ny -kerinandro marka, dia tsy misy antony tsy mandeha ho azy. Mafy manodidina ny lohavaniana tany dia afaka manampy amin’ny fanomanana ny vatana ho an’ny fiterahana sy ny fanarenana izay tonga rehefa afaka izany. Ary orgasms dia tsara tarehy fomba mahafinaritra mba ampio feo izany faritra izany. Fa na dia bebe kokoa ny workout, miezaka manao Kegels mandritra ny firaisana ara-nofo. Ianao paompy ireo hozatra kokoa ary mety ny fahafinaretana lafin-javatra ho anareo roa.
Ka raha mbola ianao mahatsiaro ho azy, get sahirana
Raha tsy hoe ny dokotera milaza aminao fa raha tsy izany, manana firaisana ara-nofo mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy tanteraka soa aman-tsara, fa tsara ho anareo, ny mpiara-miasa ary na dia ny zaza. Ary raha toa ka manana fanontaniana na ahiahy amin’ny fotoana rehetra mandritra ny fitondrana vohoka, mitondra azy ireo amin’ny ny fikarakarana ara-pahasalamana izay ilaina mba hametraka an-tsainao miadana. Avy amin’ny Inona no Hitranga ekipam sy Heidi Markoff, mpanoratra ny Zavatra Hitranga Rehefa Ianao Miandry. Ara-pahasalamana vaovao momba ity takelaka ity dia mifototra amin’ny mpiara-nandinika medical journals, ary tena hajaina ny fahasalamana fikambanana sy ny andrim-panjakana ao anatin’izany ny Oniversite Amerikana ny Obstetricians sy Gynecologists, ivon-toerana ho fanaraha-Maso ny Aretina sy ny Fisorohana sy ny American Academy ny Pediatrics, ary koa ny Zavatra Hitranga boky amin’ny Heidi Markoff. Ny fanabeazana ara-pahasalamana afa-po amin’ny Zavatra Hitranga dia reviewed by ny ekipa ny manam-pahaizana mba ho ny zava-misy ary mifanaraka amin’ny farany mifototra amin’ny porofo ara-pahasalamana vaovao sy nanaiky torolalana ara-pahasalamana, anisan’izany ny fitsaboana nandinika Izay Hitranga boky amin’ny Heidi Markoff. Ity toerana mifanaraka amin’ny Honchoed faneva ho mendri-pitokisana, ara-pahasalamana vaovao. Io fanabeazana dia tsy afa-po ara-pitsaboana na ny fanombanana ny toro-hevitra. Ny mampiasa izany toerana, dia iharan’ny ny fifanekena momba ny tsiambaratelo sy ny fiainana manokana ny politika.
FREE ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA AMIN'NY REAL ESTATE